CENI : Hampivory ny mpanao politika -
AccueilRaharaham-pirenenaCENI : Hampivory ny mpanao politika
Amin’izao ankatoky ny fifidianana izao dia mitohy hatrany ny ezaka izay tanterahin’ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana indrindra ny fihaonana amin’ ireo mpanao politika, anton’ izany moa ny mba hifampizarana ny vaovao sy hifanakalozana ihany koa, ary indrindra ny hampangaraharahana ny fifidianana. Fihaonana izay hanomboka anio ity fihaonana ity, ary tsy hifarana raha tsy amin’ ny faha-17 ny volana janoary ho avy izao. Raha ny fanazavana azo hatreto dia ny fifampidinihana sy ny hitondran’ny CENI ny ezaka efa vita amin’ ny fanomanana no hiompanan’ ny lahadinika. Ankoatra izay kosa dia hiavaka ity fihaonana ity, satria dia hisy ny fihaonan’ny filohan’ ny CENI amin’ ireo filohan’antoko sy ireo tompon’andraikitra ara-politika maro. Samy etsy Nanisana izay misy ny rantsan’ny biraon’ ny CENI avokoa no hanatanterahana izany fihaonana izany, izay hahazoan’ ireo mpanao politika manontany ireo izay tsy mazava amin’ izy ireo ihany koa mikasika ny fifidianana ny fihaonana.
Ho an’ireo mpanao politika kosa dia ny fanontaniana mikasika ny lalàm-pifidianana no anisan’ny mbola baraingo amin’izy ireo hoe aiza ho aiza, satria dia io hatrany no anisan’ny fanontaniana mipetraka ataon’ireo mpanao politika. Mazava kosa anefa ny efa nambaran’ny praiminisitra lehiben’ny governemanta Mahafaly Solonandrasana Olivier mikasika ity lalàn’ny fifidianana ity, fa efa hisy ny fiantsoana ireo solombavambahoaka, ary amin’ izay fotoana izay no avy hatrany dia hisy ny fandinihana io lalàna io eny amin’ny antenimieram-pirenena. Noho izany dia efa mandray ny andraikiny tokoa ny fitondram-panjakana amin’izao fotoana izao, ary efa misy ny fijerena izay hampangaraharahana ny fifidianana, izay hotanterahina amin’ity taona ity araka ny efa nambaran’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina